१० साउन, काठमाडौं । एउटै औषधि कतिसम्म महँगो होला ? सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता हो– जोल्जेन्स्मा नामको औषधिलाई २१ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (२५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) पर्छ । स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ ।
भैरहवाकी २२ महिने सियोना श्रेष्ठ उक्त औषधिबाट उपचाररत छिन् । यी सानी नानीको महँगो उपचार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । एलिना गुरुङ श्रेष्ठ र डा. सन्दिप श्रेष्ठकी छोरी एलिनाको दुबईमा उपचार भइरहेको छ । सियोनालाई ५ महिना हुँदादेखि नै एसएमए रोगको लक्षण देखिएको थियो । यो रोग विश्वकै दुर्लभ एवं महँगो मेरुदण्डसम्बन्धी रोग हो । सियोनाका अभिभावकले करिब १० महिनादेखि उनको विभिन्न देशमा उपचार गराइरहेका छन् । गत असार ३१ गते उनलाई दुबईको एक अस्पतालमा जोल्जेन्स्मा नामक महँगो औषधि दिइएको हो ।
सियोनामा मावलका हजुरबुवा पूर्ण गुरुङका अनुसार औषधि दिइएपछि उनको शरीरमा सेतो रक्तकोषको कमी देखिएको छ। उनलाई आईसीयूमा राखिएको छ। महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग गरिएका कारण उनलाई केही साइड इफेक्ट देखिएको तर नियन्त्रण आउन सम्भ हुने चिकित्सकहरूलाई परिवारलाई अवगत गराएका छन् । सियोनाको स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा आउन केही दिन लाग्ने डाक्टरहरूको भनाइलाई उधृ्रत गर्दै गुरुङले जानकारी दिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
नेपाल भित्रियो विश्व रेकर्ड राखेको स्कुटर, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
उत्तर कोरियाद्वारा विश्वकै शक्तिशाली हतियार प्रदर्शन गरिएको दाबी
ओली कमजोर भएपछि पशुपति धाउन थालेः रघुजी पन्त
कुलमान घिसिङ बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्त !
बेपत्ता बुहारीको शव घर नजिकै सडेको अवस्थामा फेला
जति मूल्य हाले पनि चामल पाइँदैन
डोटी जिप्रकामा दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती
वीर अस्पतालमा १८ शैयाको आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्दै चौधरी फाउन्डेसन
नेपाललाई ५ लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने चीनको घोषणा
चितवनका दुई अस्पतालमा पाँच सङ्क्रमितको मृत्यु
मान्छेको जस्तै दाँत भएको दुर्लभ माछा भेटियो
गाईले नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि सबै दङ्ग !
काली गण्डकी माथि बन्यो नेपालकै पहिलो स्काइ चियर, कफी पिउँदै हिमाल र बन्जीको मज्जा लिन सकिने